August 2021 - Celegroup
August 31, 2021 cele group 0
တက်ကစီငှားစီးမိတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ကိုယျတှဖွေ့ဈရပျ ကမြ ဒီနေ့ နခေ့ငျး မွောကျဥက်ကလာကနေ လှညျးတနျးသှားတော့ တက်ကစီငှားစီးသှားတယျ။ ကမြက ဖစေ့ဖုတျ ကွညျ့နကေလြူဆိုတော့ တက်ကစီကို သခြောရှေးပွီးငှားရတယျ။ ကားထဲမှာလူပိုပါသလား။ အဲကှနျးဖှငျ့ထားသလားကွညျ့ရတယျ။ ဆေးခပျမှာကွောကျလို့။ အဲဒါနဲ့ ကားငှားတာ တျောတျောကွာသှားတယျ။ နောကျဆုံး တက်ကစီတဈစီးကတြော့မှ ကားသမားပုံစံကလညျး ရိုးသားတဲ့ပုံပျေါတယျ။ အဲကှနျးလညျးဖှငျ့မထားဘူး။ လူပိုလညျးမပါဘူး။ ပိုစိတျခရြအောငျ ထပျမေးလိုကျသေးတယျ။ လူထပျတငျမှာလား။ လမျးမှာ အဲကှနျးဖှငျ့မှာလား ဆိုတော့ လူထပျမတငျပါဘူး တဲ့။ အဲကှနျးကလညျး ပကျြနတော […]
စိတ်ဆိုးနေရင်တောင် မိဘကို မပြောသင့်တဲ့စကား(၇)မျိုး…..
စိတျဆိုးနရေငျတောငျ မိဘကို မပွောသငျ့တဲ့စကား(၇)မြိုး… မင်ျဂလာပါ ပရိသတျကွီးရေ ယခုဖျောပွပေးမှာကတော့ မိဘနဲ့သားသမီးကွားမှာ စိတျအခနျ့မသငျ့လို့ မိဘကိုပွနျပွီးတော့ အျောမိပွောမိတာတှရှေိတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီလို ပွနျပွောတတျတာတှကေ တဈခါတဈလမှော ဘာမှမဖွဈပမေယျ့ မသိသာကွပမေယျ့ မိဘတှကေို လုံးဝ မပွောသငျ့တဲ့စကားဆိုတာမြိုးလညျး ရှိပါသေးတယျ။ ကိုယျတှကေ မသိလိုမသိဘာသာ ဒီအတိုငျး အမှတျတမဲ့ပွောလိုကျတဲ့ စကားတှေ ဆိုပမေယျ့ ကိုယျတှကေို တကယျခဈြပွီး တကယျဂရုစိုကျပေးကွတဲ့ မိဘတှကေိုတော့ မပွောသငျ့တဲ့စကား (၇) မြိုးရှိပါတယျ။ အထူသဖွငျ့ ကိုးလလှယျ […]
“အကနျး ရတှေငျးကြ” ဆိုတဲ့လူမြိုးတော့ မဖွဈပါစနေဲ့
တဈခါတုနျးက ကွီးကနျး တယောကျ ရှိလသေညျ ။ ကွီးကနျး တယောကျလို့ ဆိုလိုကျတာနဲ့ ငှကျကြီးကနျးကို ပွောခွငျး မဟုတျပါ ။ အသကျကွီးမှ မကျြစိ ကှယျတဲ့ မကျြကနျး တယောကျကို ပွောခွငျးသာ ဖွဈပါသညျ ။ သူဟာ မကျြစိ ကနျးနပေမေယျ့ မကျြကနျး တယောကျလို မနပေဲ ဟိုစပျစပျ ၊ ဒီစပျစပျနဲ့ နရောတကာ ပါရုံတငျမကပဲ သူဘယျလောကျပဲ မှားမှား အမှားကို ဝနျမခံပဲ […]
အရိုးကြိုးတာ လကျတှပြေ့ောကျကငျး၍ အလုပျကွမျးမြားပငျ လုပျဆောငျနိုငျတဲ့နညျးလမျးကောငျး…..
အရိုးကျိုးတာ လက်တွေ့ပျောက်ကင်း၍ အလုပ်ကြမ်းများပင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကောင်း….. ဤဆေးနည်းသည် အရိုးတစ်ခါ နှစ်ခါ ကျိုးထားသည့် သူများပင် လက်တွေ့ပျောက်ကင်း၍ အလုပ်ကြမ်းများပင် လုပ်ဆောင်နိုင်နေကြပြီဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည်ဖြင့်အညွှန်းအတိုင်းပြုလုပ်ပါလေ။ ဆေးနည်း-မိသ၁လင်ဥအစိမ်း၊ နနွင်းစိမ်း၊ ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်၊ မာလာဥစိမ်း၊ သက်ရင်းကြီးရွက်၊ နဘူးဆီးမခမ်း၊ ထမင်းဖြူ (ဝက်ဆီနှင့်မလွှရွက်,ထည့်လည်းရ မထည့်လည်းရသည်) ပြုလုပ်ပုံ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အနည်းငယ်စီ ညက်အောင်ထောင်း၍ အဝတ်သန့်သန့်ဖြင့်ထည့်ပီးအနည်းငယ် နွေးနေအောင် မီးပြ၍ (မီးမပြလိုရင် ရေနွေးအိတ်ကပ်၍) နွေးလာလျှင် ဖြစ်ပွားသည့်နေရာပေါ်သို့အုံပြီး ကျပ်စည်းပေးရပါသည်။ […]
ခေါငျးမှစပွီး ရလေောငျးခြိုးတတျ သူမြားအတှကျ သတိပွုဖှယျ
ခေါင်းမှစပြီး ရေလောင်းချိုးတတ် သူများအတွက် သတိပြုဖွယ် ခေါင်းကနေစပီး ရေလောင်းချိုးရင် လေ ဖြတ် တတ် တယ် ဆို တာ သင် သိ ပါ သ လား ရေချိုးနေစဉ်ဦးခေါင်းကို စတင်ပြီး ရေလောင်း မ ချိုး သင့်ပါ ။ ကျွန်မတို့ဟာ သွေးနွေး သတ္တဝါတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ အတွက် ခန္ဓာကိုယ်က အ ပူ ချိန် ကို အလျင်အမြန် […]
ခါးသီးလှနျးပမေယျ့ တဈခြိနျခြိနျမှာ လကျခံရမယျ့ အမှနျတရား (၃)ခု….
ခါးသီးလွန်းပေမယ့် တစ်ချိန်ချိန်မှာ လက်ခံရမယ့် အမှန်တရား (၃)ခု…. လောကနိယာမသဘောတရားကိုက အမှန်တရားဆိုတာ တခါတေလ ခါးသီးလွန်းလှပါတယ်။ သင့်အတွက် လက်ခံရခက်ခဲပြီး သင်လက်ခံရမှာကြောက်နေပေမယ့် တချိန်ချိန်မှာ မဖြစ်မနေ လက်ခံလာရမယ့် အမှန်တရား(၃) ခုကိုဝေမျှ ပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ သင်ချစ်တဲ့သူအားလုံးနဲ့ တစ်နေ့ ခွဲရမှာဖြစ်တယ် ဒီအမှန်တရားဟာ စာရေးသူကိုအပါအဝင် စာဖတ်သူတို့ကိုပါ တဒင်္ဂ ငေးငိုင်သွားစေမယ့် အမှန်တရားတစ်ခုပါပဲ။ သင်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ပဲဆိုဆို သင်ချစ်တဲ့သူ သငျတနျဖိုးထားရတဲ့သူတှဟော တစ်နေ့ သင့်ကိုခွဲခွာ သွားရမှာပါ။ ကျွန်မတို့တွေအားလုံးဟာ […]
3 မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီးဖက်လိုက်ပါ…. သူက မင်းကို တစ်အားလည်းရစ်တယ် ။စိတ်ကောက်ရင်လည်း ခဏ ခဏ ပဲ ။သဝန်တိုတာလည်း အကြိမ်ကြိမ် ။ ဘယ်မှာလဲ ? ဘာလုပ်နေလဲ ?ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ နဲ့ မင်း ကို မေးနေ ၊ ပြောနေတာ ကို မင်း က သံသယ မျက်လုံးတွေ နဲ့ အကြည့်ခံနေရတယ် ဆိုပြီး မကြိုက်ဘူး။ အဲ့လို များ […]
တခါတုနျးက ကြီးကနျးတှရေဲ့ စာသငျကြောငျးမှာ ဆရာမကွီးက တပညျ့တှကေို ဆုံးမတယျ ။ ” မငျးတို့ အားလုံး ငါပွောတာကို ကွားတယျ မဟုတျလား ” ” ကွားပါတယျ ဆရာမကွီး ” ” အေး.. ဒီပုံပွငျထဲက ကြီးကနျးလို မမိုကျမဲ မိကွစနေဲ့ ။ ဆငျသကေောငျရဲ့ အသားကို စားဖို့ မကျမောရငျး ပငျလယျထဲမှာ ဒုက်ခ ရောကျရတယျ ။ ကမျးမမွငျ လမျးမမွငျ […]
ကားတဈစီးဝယျမယျဆိုရငျ မဖွဈမနေ စဈဆေးသငျ့တဲ့ အခကျြ (၈) ခကျြ
ကားတဈစီးဝယျမယျဆိုရငျ မဖွဈမနေ စဈဆေးသငျ့တဲ့ အခကျြ (၈) ခကျြ ၁။ အရိုးဆဈ ကောငျး မကောငျး ကွညျ့မယျ – အရိုးဆဈကောငျး မကောငျးကို အရငျဦးဆုံးရှကေ့ ဘောနပျ (စကျဖုံး)ကို ဖှငျ့ပါ ရှော့ဘား အထိုငျ နရော ပတျလညျ ခကျြစီတနျးနရော ပတျလညျကို အသခြောကွညျ့ပါ။ တဈခြို့ကား တှမှော ခကျြ စီတနျးက ထိုငျခုံအောကျမှာ ရှိပါတယျ အောကျမှာ ပုံနှငျ့တကှ ပွပေးထားပါတယျ အဲဒီနရောတှမှော […]